सामग्री राजा हो ... तर केवल एउटा मुकुट लगाउँछ Martech Zone
मंगलवार, मार्च 7, 2017 बुधबार, मार्च 8, 2017 Douglas Karr
तपाईंले भन्नुभएको कुरा सबै ठाउँमा सुन्नुभयो, सामग्री राजा हो। म विश्वास गर्दिन कि यो परिवर्तित भयो, वा म विश्वास गर्दिन कि यो कहिले हुन्छ। चाहे यो कम्पनीहरूले उनीहरूको उत्पादनहरू र सेवाहरूको बारेमा लेख्दछन्, मिडिया आउटलेटहरू उनीहरूको बारेमा लेख्दछन्, साझा मिडिया आउटलेटहरू साझा गर्दैछन्, भुक्तान गरेको मिडिया आउटलेटहरू उनीहरूलाई प्रमोट गर्दछ ... यो त्यस्तो सामग्री हो जुन प्रभाव, अख्तियार, र खरीद निर्णयहरू चलाउँदछ।
समस्या तब आउँछ जब सबैजना विश्वासमा छन् उनीहरुको सामग्री राजा हो। इमानदार हुनुहोस्, धेरै सामग्रीहरू डरलाग्दो छ। यो प्राय उत्पादन रेखा, सदाबहार सामग्री हो जसमा चरित्र, कथा, वा आफैं भिन्न गर्न केहि पनि हुँदैन। वा यो मार्केटिंग-स्पीक हो, सामग्रीको साधारण डिनोमिनेटर अफसरशाही र माइक्रोमेनेमेन्टको तहहरूको माध्यमबाट तल झारिन्छ।
न त, पाठ्यक्रम, को योग्य छ क्राउन। तपाईंको सामग्री राजा हुन सक्दैन जबसम्म यो अनौंठो, उल्लेखनीय छ, र युद्धमा विजय प्राप्त गर्दैन। राजा बन्न चाहानुहुन्छ? (वा रानी - सामग्रीको कुनै लि gender्ग छैन)। यहाँ केहि सुझावहरू छन्:
भाग पोशाक - राजाले साधारणको लुगा लगाउँदैन, उसको पहिरन बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातु र उत्कृष्ट सूती कपडाले सजिएको छ। तपाईंको सामग्री कस्तो देखिन्छ?
आफ्नो अदालत आदेश - राजा शान्त छैन। उसले बोलेको शब्दहरू उसले कडा आवाजमा हालेको छैन। उहाँ विश्वस्त र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। के तपाइँको सामग्री हो?
आफ्ना शत्रुहरूलाई नष्ट गर्नुहोस् - यदि तपाईं राजा हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो राज्य शासन गर्नु पर्छ। के तपाइँ तपाइँको सामग्रीहरु आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरु संग तुलना गर्नुभयो? यो नजिक हुन सक्दैन; यो अनुसन्धान, मिडिया, आवाज, र प्रभाव संग ती प्रहार गर्न पर्छ। कुनै कैदी लिनुहोस्।
तपाईंको नाइटहरू लगाउनुहोस् - यो तपाईंको राज्यमा अझै बस्न पर्याप्त छैन। तपाईंको सामग्रीलाई पृथ्वीको छेउमा पुर्‍याउन आवश्यक छ जसले आफ्नो निष्ठाको कसम खान्छन्। कर्मचारी अधिवक्ताहरू, प्रभावकर्ताहरू, र तपाईंको श्रोताहरूले तपाईंको सन्देश जनसाधारणमा बोक्नु पर्छ।
शानदार उपहार प्रदान गर्नुहोस् - छिमेकी राज्यहरू केवल केही सुनका सिक्का टाढा छन्। भव्य उपहारको साथ छिमेकी राज्यहरूमा रोयल्टी बिगार्न नडराउनुहोस्। अर्को शब्दहरु मा, राजा Zuck एक महान दर्शक को स्वामित्व छ - उसलाई तिर्न!
हे, यो राजा हुन राम्रो छ। तर तपाई केवल एक गिलोटिन हुनुहुन्छ आफ्नो टाउको हराउनबाट। आफ्नो देशको रक्षा गर्न तयार हुनुहोस् र दुश्मनहरूमा आतंकको शासन गर्नुहोस्।
टैग: अख्तियारसामग्री राजा होसामग्री मार्केटिङक्राउनसदाबहारराजा